ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ » Sandals Resorts သည် အားလပ်ရက်များအတွက် ရက် 40 လက်ဆောင်များကို လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။
အန်တီဂွါ & ဘာဘူဒါ Breaking News • ဘဟားမား Breaking News • ဘာဘေးဒိုးစ Breaking News • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ကာရစ်ဘီယံ • Curacao သတင်းထူးများ • ဂရီနာဒါ Breaking News • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • ဂျမေကာသတင်းထူးများ • ဇိမ်ခံသတင်းများ • သတင်း • စိန့် Lucia Breaking News • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွားအပေးအယူများ | ခရီးသွားလာရေးအချက်များ • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားလျှို့ဝှက်ချက်များ
၎င်းသည် ၎င်း၏သစ္စာရှိပြန်လာသော ဧည့်သည်များနှင့် Sandals Select Rewards Members ဖြစ်လာလိုသော အနာဂတ်ဧည့်သည်များအတွက် ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အားလပ်ရက်ရာသီအတွက် ရက် 40 လက်ဆောင်များဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 1 ရက်မှစတင်၍9ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2022 ရက်နေ့အထိ လည်ပတ်သူများသည် Sandals Resort ရှိ Love Nest Butler Suite တွင်7ဦးအတွက်2ရက်တာ ခရီးထွက်မည့် နေ့စဥ်ဆုများစွာကို ဆွတ်ခူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ဆုများတွင် လေကြောင်းလိုင်းမိုင်၊ အပန်းဖြေစခန်းမှ ခရက်ဒစ်များ၊ Island Routes Tour ခရက်ဒစ်၊ Sandals Select Reward အမှတ်များ၊ စုံတွဲအနှိပ်များ၊ Waterford ရှန်ပိန်ပုလွေများနှင့် အခြားအရာများ ပါဝင်ပါသည်။
1. ခြေညှပ်ဖိနပ်တစ်ဦးဖြစ်ရန် ဆုလာဘ်အဖွဲ့ဝင်ကို ရွေးချယ်ပါ (အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘူးလား? ဒီမှာစာရင်းသွင်းပါ)
2. နေ့စဉ်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ နှစ် 40 ချစ်ခြင်းမေတ္တာ Giveaway စာမျက်နှာ
3. တစ်နေ့တာ၏စစ်တမ်းကိုဖြေဆိုခြင်းဖြင့်နေ့စဥ်ကစားပါ (Grand Prize Getaway သို့ဝင်ရောက်မှု 40 အထိ)
ထို့အပြင်, Sandals' နှစ် 40 နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ လွမ်းဆွတ်ဖွယ် '16 မှုတ်သွင်းထားသော ရေကူးကန်ပါတီများ၊ ပြန်လည်ပုံဖော်ထားသော ရေကူးဘားမီနူးများ (မူရင်းရေကူးဘားကို တီထွင်သူများအနေဖြင့်)၊ စိတ်ကြိုက်လက်လုပ်ထားသည့် ကော့တေးများနှင့် အခြားအရာများပါရှိသော Sandals Resort 81 ခုလုံးတွင် ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
ဧည့်သည်များသည် Sandals ဖောင်ဒေးရှင်းသို့လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပြီး ကျွန်း၏ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုစီသို့ နောက်ထပ်ပရောဂျက် 40 ကို ယူဆောင်လာမည့် 40 for 40 Initiative အသစ်မှတစ်ဆင့် ဒေသခံကာရေဘီယံအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် အပြောင်းအလဲတစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။